Tsika dzeCuba, ndedzipi tsika dzeCuba? | Absolut Kufamba
Pane zvinhu zviviri zvakakosha mu Tsika dzeCuba: mhuri uye shamwari. Izvo zvimwe zvinhu zvakakosha zvakanyanya mutsika nemagariro enyika ino ini ndinouya nemufaro uye neruvara. Mhemberero muCuba Mahoridhe anogona kusanganisira mapoka makuru evanhu vese vachifambidzana pamwechete.
1 Gastronomy yenharaunda yeCuba
2 Tsika dzeCuba
3 Mitambo yeCuba
4 Tsika dzeCuba
5 Iyo tsika iyo iri chikamu chetsika dzeCuba
Gastronomy yenharaunda yeCuba
Eheka chikafu chakakosha zvikuru mutsika dzeCubaNepo michato yeCuba isingawanzosiyana zvakanyanya kubva kune dzimwe tsika dzekuMadokero kunze kwemisiyano mishoma.
MuKisimusi semuenzaniso, maCuba anowanzo kupemberera pamwe nekuungana kwemhuri uko nhengo dzese dzemhuri dziripo. Naizvozvo vanowanzoita misangano mikuru kwazvo. Sezvambotaurwa, chikafu chinhu chakakosha mu tsika dzenzanga yeCuba.
Imwe ye zvechinyakare madhishi panguva ino ine nyama yenguruve sechinhu chayo chikuru. Mhuka inogadzirirwa kubva pamazuva mashoma pamberi kuti ive nechokwadi chekuti yakagadzirira nezuva rakatarwa uye kuti panogona kuve nechikafu chinokwana munhu wese. Desserts zvakare ari tsika muCuba yeKisimusiNekudaro, munyika ino kuchinjaniswa kwechinyakare kwezvipo hakuwanzo kuitwa kana kureva Santa Claus.
Nezve iyo tsika yegore idzva muCubaChinojairika kubvisa nguva dzakaipa dzegore rapfuura kuitira kuti gore riuye zvirinani. Nechikonzero ichi, nenzira yekufananidzira, maCuba anowanzo pisa chidhori manheru egore idzva semumiriri wekubvisa zvese zvakashata zvakaitika mukati megore iro terminal iyi.
Zvakajairika kuti panzvimbo pe pisa chidhori, VaCuba vanokanda mvura pamapfudzi avo kuti vabvise rombo rakaipa uye vakwezve budiriro. Iyo fireworks Ivo zvakare itsika muCuba mukupera kwegore kupemberera nguva dzakanaka dzinouya. Ehe isu hatigone kutadza kutaura tsika dzekudyara dzeCuba, uko masitayera ekubika uko madhiri anosanganisira zvinonhuwira senge gariki, kumini uye oregano anomira zvakanyanya.
Zvakajairika kushandisa michero yemichero senge marinade, asi pasina mubvunzo imwe yenzira dzakajairika dzekubika mutsika yeCuba kubheka. Kutaura nezve kukwazisa, zvakajairika kuti varume muCuba vakwazisane nekubata ruoko, nepo vakadzi kazhinji vachitsvodana padama. Kutaura zvakanaka, maCuba anowanzo shandisa zvirevo zvakaita se "chisarai" o "Sara mushe".
Nezve iyo mitambo uye varaidzo muCuba, hapana mubvunzo kuti baseball ndiyo imwe yemitambo yaanofarira. Muchokwadi, zvinozivikanwa kuti maCuba anotanga kuita mutambo uyu kubva padiki kwazvo uye unodzidziswawo muzvikoro. Neichi chikonzero, hazvishamise kuona kuti guta rega rega muCuba rine yavo baseball timu. Uye ivo chaizvo vatambi ve baseball kusvika padanho rekuti vazhinji vacho parizvino vanotamba muUnited States Baseball League.
Bhokisi, kushambira, kuchovha bhasikoro, pamwe ne Basketball nevolleyball ndiyo mimwe mitambo yemitambo muCuba. VaCuba vakanaka pamitambo iyi zvekuti vanoonekwa sevane simba repasi rose mumitambo yeOlympic mune izvi zvidzidzo, ndosaka vachiwanzowana menduru dzakawanda panguva yekutora chikamu.
Nezve Tsika dzeCuba maererano nemhemberero dzakadai semichatoAvo vanoda kutamba nemuroora vanofanira kuisa mari padhirezi rake vasati vatamba naye. Muroora kana mwenga vanotenda vaenzi nekuvepo pachiitiko chakakosha ichi nekupa zvipo zvidiki zvekufananidzira.
Zvinofanira zvakare kutaurwa kuti Cuba inozivikanwa nekusiyana kwetsika nemagariro sezvo iine simba reSpanish, French, Africa uye Asia. Izvi zvakatendera maCuba kugona mune akasiyana madhiri senge hunyanzvi, mabhuku, ballet kana kutamba kwazvino, kunyangwe yemitambo Ehe, mimhanzi yeCuba inoita chikamu chakakosha mutsika nemagariro eCuba. Zvave kuCuba uko mimhanzi inonakidza yemimhanzi yakabuda semwanakomana, Danzon, bolero, Cha Cha Cha kana Mambo.
Iyo tsika iyo iri chikamu chetsika dzeCuba
Uye kana tichitaura nezvazvo tsika hupfumi, Zvivakwa zvinokatyamadza zvenguva yekoloni zvinomira pamusoro pezvose, mazhinji acho parizvino achizivikanwa seNzvimbo dzeMagariro Enyika neUNESCO. Nzvimbo senge Nhoroondo nzvimbo yeOld Havana neFort; the Guta rekare reTrinidad, mafekitori eshuga eTrinidad kana iyo masvingo eSan Pedro de la Roca del Morro, zvakare chikamu chetsika nemagariro eCuba.
Pasina kupokana, ino inyika umo iwe yaunogona kunakidzwa netsika uye runako zvisina kufananidzwa, nevanhu vanogara vakagadzirira kubatsira, vanofara uye akasiyana tsika dzeCuba kuti vafarire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika dzeCuba
maira alexandra ibañez lara akadaro
Ini ndinoda tsika dzeCuba, kukwazisa kune hushamwari uye nekuda kwemitambo ndinoida yese asi wandinofarira kutamba
Pindura kuna maira alexandra ibañez lara
starlinjaviel jimenez montan akadaro
Zvakanaka Cuba inyika yakakura, yakanaka kuteedzera yangu msn uye kundiwedzera saka tichataura zvakadzikama
Pindura kuna starlinjaviel jimenez montan
Zvakanaka Cuba inyika yakakura, yakanaka kuteedzera yangu msn uye ndiwedzere saka isu tichataura zvakadzikama uye kuteedzera tinotenda muna Mwari ndiye chete muponesi
Kutaura nezvetsika dzeCuba, chimwe chazvo chikafu chinoita kuti chinyanye kunzwa zvakanyanya, uye ndeaya:
1. Brown mupunga kana congris
3. Mupunga une zai omelete
4. Banana, taro, mbatatisi (yose yakakangwa kana yakabikwa) uye yuca (yakabikwa nemojo)
Pindura kuna ananiyasi
Zvakanaka, ini ndiri hafu yeCuba nePeruvia, nyika yangu ndeyeCuba naMay ndePeruvia, asi ndinotakura ropa kubva kuCuba uye ndezve 100pre na ke see asi ndinobva ikoko
Ini ndinoda Cuba nekuda kwekudya chete
pakupedzisira ndedzipi tsika
RUTHI ADELAIDA CEDEÑO CUADROS akadaro
NDINODA KUTARISIRA YEMAHARA VANHU VENYU uye NDINOVIMBA KUZIVA RIMWE ZUVA NEKUTI NDINODA NECUBAN, BAY KUNE VAYA VANOVERENGA IZVI
Pindura kuna RUTH ADELAIDA CEDEÑO CUADROS
RENGUVA RINOGARA CUBA NDINODA VAVO uye ZVINOGONA KUTI NDINOFUNGA ZVAKASIYANA KUNA VANHU VAMICHAS, HANDINA KUNZWISISA KANA NDINODA KUTI VAITWE NAMI
alexander hernandez bastida akadaro
Pindura kuna alexander hernandez bastida
Ana Carolina akadaro
Chii chiri kuitwa nevechidiki muCuba?
Pindura Ana Ana
yadrian gonzalez akadaro
Kunyangwe isiri nyika yakasimukira zvakanyanya, ine kukosha kusinganeti iyo hunhu uye Cuba yega yega inofanirwa kunzwa kugutsikana kuti wakaberekerwa munyika yakanaka uye inotsigira.
Pindura yadrian gonzalez
8 nzvimbo muCaribbean iwe unofanirwa kuziva
Chii chaungaona muAlmuñécar, paTropical Coast yeGranada